I-Sea Oats Oceanfront Cottage - I-Airbnb
I-Sea Oats Oceanfront Cottage
UJon unezimvo eziyi-40 zezinye iindawo.
I-Oceanfront Studio Cottage, ilungele umntu omnye okanye ababini. Indawo ephezulu yeekhilomitha ezintathu kumazantsi eDolophu yeThemba phakathi kweendawo zokuchithela iiholide ezimbini ezidumileyo ze-Elbow Cay e-White Sound e-Elbow Cay.
I-Sea Oats Cottage yindawo ethe ngqo ye-Oceanfront Studio ehleli nje emva kwendunduma yolwandle, izinyuko ukusuka elunxwemeni. Kukuhlala okugqibeleleyo komntu omnye okanye ababini. Indawo ephezulu yeekhilomitha ezintathu kumazantsi eDolophu yeThemba kwi-White Sound kwi-Elbow Cay. Iintsasa ezininzi ziqala ngokuphuma kwelanga okuhle phezu kolwandle. Yonwabela umgangatho omangalisayo ojikeleze ipropathi egutyungelwe kwimpuma ye-cottage kwaye ine-gazebo kwicala elingasentshona. Indlu encinci ikumgama ohamba lula we-Abaco Inn. Iivenkile ezintathu ezincinci zegrosari zikwi Elbow Cay. Indawo yokuhlala enomtsalane kwiDolophu yeThemba, edume ngendlu yesibane enemigca yeelekese, imalunga nemizuzu eli-15 yokukhwela kwinqwelo yegalufa. Iinqwelo zegalufa kunye nezikhitshane ziyafumaneka ukuba ziqeshwe kwiindawo ezininzi kule ndawo. I-Abaco Inn ivulwa iintsuku ezisixhenxe ngeveki kwisidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa. Siye saphinda sakha idokhi yethu kwaye sinokufaka izikhephe ukuya kuthi ga kwi-24 yeenyawo. Ngamanye amaxesha i-ankile engqongqo ingafuneka
Ukuba awukabi nazo iziqithi ze-Abaco uya kumangaliswa ngokwenene ngamanzi acwebileyo kunye neziqithi ezintle. Abantu banobuhlobo kwaye baluncedo ukwenza le ndawo ibe yindawo yokuphumla ephezulu. Kwabo baqhelene neThemba leDolophu kunye ne-Elbow Cay uya kuyixabisa indawo ephambi kolwandle kunxweme oluhle lwesanti emhlophe.
Ukusukela ukuba uDorian ekuphela kwendlela yokufumana i-intanethi kungonxibelelwano lweselfowuni yasekhaya, i-BTC okanye i-Aliv. Iindwendwe ezininzi zikhetha ukuzisa ifowuni evuliweyo kunye nabo kwaye bathenge isicwangciso "sokuhlawula njengoko usiya" kwi-BTC okanye i-Aliv.
Ezi zicwangciso zixabisa ngokufanelekileyo kwaye zingathengwa usuku, iveki okanye inyanga. I-SIM khadi inokuthengwa kwi-Marsh Harbour, kodwa imizuzu engaphezulu kunye nedatha inokongezwa kwifowuni ukude. U-Aliv ubonakala esebenza kakuhle kwi-Elbow Cay.
Ikhitshi enefriji yobungakanani obugcweleyo, izitshisi ezimbini ezakhiwe kwindawo yokupheka,
Ndinomlindi, uJean (obizwa ngokuba nguJohn), oza kudibana nawe kwindlu encinane okanye akuphuthume kwidokhi yaseHope Town Ferry.